के पोर्न फिल्म हेर्नुहुन्छ ? ख्याल गर्नुस लाग्न सक्छन यस्ता रोग !::Digital News Paper
प्रकाशित मिति :सोमवार, असार ९, २०७६ Monday, June 24th, 2019
काठमान्डौ – हुन त नेपालमा सरकारले पोर्न साइटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । पोर्न साइट बन्द गर्नुको लक्ष्य चाहि बढ्दो यौन हिंसा नियन्त्रण नै हो। यद्यपी पोर्न साइट हेर्ने क्रममा कमी आयो भन्न सकिने अवस्था छैन । तर अनेक माध्याम र बाटा यस्ता सामाग्री चुहिने गर्छन्। यौनजन्य सामाग्री अहिले धेरैको लागि सहज पहुँचको विषय भएको छ । मोबाइल र घर-घरमा इन्टरनेटको पहुच छ । त्यस कारण यौनजन्य सामाग्री हेर्न कसले छेकबार लगाउने ? यौनजन्य गतिविधिमा रमाउनु मानविय प्रवृत्ति पनि हो । यसर्थ यस्ता यौनजन्य जिज्ञासा मेट्ने र यौन तृष्णा मेट्ने माध्याममाथि प्रतिबन्ध लगाउनु त्यती वैज्ञानिक विधी होइन । अरुको कर र बलमा होइन, आफ्नै विवेकले यस्ता कुराहरु त्याग्नुपर्छ । किनभने यौनजन्य सामाग्री हेर्ने अर्थात पोर्न साइट हेर्ने लत आफैमा राम्रो होइन । यसले प्रत्यक्ष केही असर पुर्‍याउँछ ।
कस्तो असर गर्छ
१. जस्तो, हाम्रो समय नष्ट गर्छ ।
२. मनमा यौन विकार पैदा हुन्छ ।
३. पारिवारिक जीवन प्रभावित बनाइदिन्छ ।
४. यौनजन्य सामाग्री खोज्ने र हेर्ने लत लाग्छ ।
पोर्न साइटको साइड इफेक्ट
मेडिकल डेली रिपोर्टका अनुसार पोर्न साइट हेर्ने बानी भएपछि मान्छेको मतिष्क धेरैजसो समय यौनजन्य कुराले ओगट्न थाल्छ । एक अध्यनका अनुसार यस किसिमको फिल्म हेर्न थालेपछि डोपामाइन हर्मोन निर्माण तिब्र हुन्छ, जसले कामेच्छा -सेक्स ड्राइभ) बढाउँछ । यो हर्मोन न्यूरो ट्रान्समिटरको रुपमा काम गर्छ ।अहिले किशोरपुस्ता यौन सामाग्रीमा बढी रुची राख्छन् । उनीहरुका लागि यसको पहुँच पनि सहज छ । एक रिसर्च अनुसार करिब ७० प्रतिशत किशोर यौनजन्य सामाग्री हेरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुमा यौनजन्य सामाग्री हेर्ने उत्सुकताले मस्तिष्कको विकासमा असर पुग्छ ।
पोर्न साइट वा अश्लिल सामाग्री हेर्ने बानी भएपछि त्यसको सबैभन्दा खराब प्रभाव उनको आनीबानीमा पर्छ । जस्तो कि, यस किसिमको लत भएकाहरु एकान्तमा बस्न रुचाउँछन् । साथीमाझ घुलमिल हुने, रमाइलो गर्ने गर्दैनन् । एक्लै बस्ने, एकान्त खोज्ने गर्छन् । जब उनीहरुलाई यस्तो अनुकुलता मिल्छ, तब यौनकै बारेमा सोच्न थाल्छन् । यसबाट के हुन्छ भने उनीहरु पारिवारिक र सामाजिक जीवनबाट टाढा हुन्छन् ।